Labada dhinac ayaa si wada jir ah shaaca uga qaaday in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu hogaamiyo ee ajnabiga ah ay muhiim u tahay nabad waarto oo ka dhalata dalka Afghanistan.
Ka qeyb-galayaasha kulankaas ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wada-hadallada tooska ah ee Mareykanka uu la leeyahay Taliban, si heshiis laga xaajooday looga gaaro dagaalka Afghanistan ee socda 18-ka sano.
Safaaradda Russia ee Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba-joogta Afghanistan ee Russia ay soo abaabuleen wada-hadallada Moscow, in kasta oo wufuuddda shirka ay si hoose u qireen in xukuumadda Moscow ay kaalin weyn ka cayaartay agaasinka kulanka.
10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qeyb-galay kulanka waxaana hogaaminayey madaxooda wada-xajaoodka Sher Muhammad Abbas Stanikzai.
Madaxweynihii hore ee Afghanistan, Hamid Karzai ayaa hogaaminayey koox ka kooban 40 siyaasi oo isugu jira saraakiil hore, musharaxiin madaxweyne, dagaal-oogeyaal, hogaamiyayaal qabiil iyo kooxaha xuquuqda dumarka.